Torolàlana farany ho an'ny mpanonta 3D | fitaovana maimaim-poana
Torolàlana farany ho an'ny mpanonta 3D
Isaac | | Nohavaozina tamin'ny 25/02/2022 13:33 | Fanontana 3D
Ny famokarana additive dia manana sehatra fampiharana bebe kokoa, na eo amin'ny sehatry ny fialam-boly na amin'ny indostria sy ny teknolojia. Ny mpanonta 3D dia tonga nanova ny fomba fanontanao ary manangana rafitra vaovao izy ireo, izay mety manomboka amin'ny zavatra kely ka hatramin'ny sela velona ary na dia trano aza, na ampahany aerodynamic ho an'ny motorsport.
Hatramin'ny taona vitsivitsy lasa izay, ny fanontam-pirinty 2D dia zavatra momba ny siansa foronina. Maro no nanonofy ny ho afaka hanonta zavatra fa tsy sary na lahatsoratra amin'ny taratasy XNUMXD tsotra. Amin'izao fotoana izao dia efa matotra ny teknolojia fa misy teknolojia, marika, modely tsy tambo isaina, sns. Ao amin'ity torolalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ireo mpanonta hafa ireo ianao.
1 Inona no atao hoe voxel?
2 Inona no atao hoe mpanonta 3D
2.0.1 Tantaran'ny fanontana 3D
2.1 Inona no atao hoe famokarana additive na AM
2.2 Inona no atao hoe bioprinting
2.3 Ahoana ny fiasan'ny mpanonta 3D
3 Famolavolana 3D sy fanontana 3D
3.1 Lozisialy mpanonta printy 3D
3.1.2 Fanafody Ultimaker
3.1.4 mpanao hevitra
3.1.7 Autoodes AutoDAD
3.1.10 mesh laboratoara
3.2 Fanontana 3D
4 Fanontaniana mipetraka matetika
4.0.1 Ahoana ny fomba hanokafana STL
4.0.2 Modely 3D
4.0.3 Avy amin'ny tena modely (3D scanning)
5 Fampiharana sy fampiasana ny mpanonta 3D
5.1 prototypes injeniera
5.2 maritrano sy fanorenana
5.3 Famolavolana sy fanamboarana firavaka sy kojakoja hafa
5.4 Fialam-boly: zavatra vita amin'ny mpanonta 3D
5.5 Indostria famokarana
5.6 Mpanonta printy 3D amin'ny fitsaboana: dentistry, prosthetics, bioprinting
5.7 Sakafo / sakafo vita pirinty
6 Fampahalalana misimisy kokoa
Inona no atao hoe voxel?
Raha mbola tsy fantatrao ny voxl, zava-dehibe ny fahafantaranao hoe inona izany, satria amin'ny fanontana 3D dia zava-dehibe izany. Izy io dia fanafohezana ny teny anglisy «volumetrique pixel», singa toratelo izay mahaforona zavatra telo dimanjato.
Misy singa hafa koa toy ny texel (singa texture na texture pixel), izay singa faran'izay kely indrindra amin'ny texture mipetaka amin'ny surface amin'ny sary amin'ny ordinatera, na ny tixel (tactile pixel), izay ny neologism izay manondro karazana iray. amin'ny teknolojia haptic ho an'ny efijery fikasihana, mamela ny fanaovana simulate ny fikasihan'ny textures samihafa.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ho izany ny 2D mitovy amin'ny piksel. Ary, araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony, raha mizara ho cubes io modely 3D io, dia ho voxel ny tsirairay amin'izy ireo. Zava-dehibe ny mamaritra hoe inona izany, satria ny mpanonta printy 3D mandroso sasany dia mamela ny fifehezana ny voxel tsirairay mandritra ny fanontana mba hahazoana vokatra tsara kokoa.
Inona no atao hoe mpanonta 3D
Ny mpanonta 3D dia milina afaka manonta zavatra misy volume avy amin'ny famolavolana solosaina. Izany hoe, toy ny mpanonta mahazatra, fa tsy manao pirinty amin'ny sehatra fisaka sy amin'ny 2D, dia manao izany amin'ny lafiny telo (sakany, lavany ary haavony)). Ny teti-dratsy ahazoan'ireo vokatra ireo dia azo avy amin'ny modely 3D na CAD, ary na dia avy amin'ny zavatra ara-batana tena izy aza. XNUMXD scan.
Ary afaka izy ireo manonta ny karazan-javatra rehetra, manomboka amin'ny zavatra tsotra toy ny kaopy kafe, mankany amin'ny zavatra sarotra kokoa toy ny tavy velona, ​​trano, sns. Raha lazaina amin'ny teny hafa, eto ny nofinofin'ny maro izay naniry ny ho velona amin'ny taratasy ny sariny vita pirinty, ary mora azo ampiasaina mihoatra ny indostria, ao an-trano ihany koa.
Tantaran'ny fanontana 3D
Ny tantaran'ny fanontana 3D dia toa vao haingana, fa ny marina dia tsy maintsy miverina am-polony taona vitsivitsy izy io. Mipoitra avy amin'ny mpanonta inkjet tamin'ny 1976, izay efa nisy ny fandrosoana tamin'ny fanoloana ny ranomainty fanontana amin'ny fitaovana hamokarana zavatra miaraka amin'ny boky, manao dingana manan-danja ary manamarika ireo dingana lehibe amin'ny fampivoarana ity teknolojia ity hatramin'ny milina ankehitriny:
Tamin'ny 1981 ny fitaovana fanontam-pirinty 3D voalohany dia natao patanty. nataony izany Dr Hideo Kodama, ao amin'ny Institiota Fikarohana Indostrialy Monisipaly Nagoya (Japon). Ny hevitra dia ny hampiasa fomba 2 samy hafa noforoniny amin'ny famokarana additive amin'ny fampiasana resin-tsaro-pady, mitovy amin'ny fomba fanaovana chips. Na izany aza, ho foana ny tetikasany noho ny tsy fahampian'ny zanabola sy ny famatsiam-bola.
Tamin'ity folo taona ity ihany, injeniera frantsay Alain Le Méhauté, Olivier de Wittte ary Jean-Claude André, nanomboka nanadihady ny teknolojia famokarana amin'ny fanamafisana ny resins photosensitive miaraka amin'ny fanasitranana UV. Tsy neken'ny CNRS ny tetikasa noho ny tsy fisian'ny faritra fampiharana. Ary, na dia nangataka patanty aza izy ireo tamin'ny 1984, dia nilaozana izany tamin'ny farany.
charles hullTamin'ny 1984, niara-nanorina ny orinasa 3D Systems izy, namorona stereolithography (SLA). Izany dia dingana iray ahafahana manonta zavatra 3D avy amin'ny maodely nomerika.
La milina 3D karazana SLA voalohany Nanomboka nivarotra izy io tamin'ny taona 1992, saingy lafo be ny vidiny ary mbola fitaovana tena ilaina.
Tamin'ny taona 1999 dia nisy dingana lehibe iray hafa voamarika, tamin'ity indray mitoraka ity bioprinting, afaka mamorona taovan'olombelona ao amin'ny laboratoara, indrindra fa ny tatavia amin'ny urinary mampiasa coating synthétique miaraka amin'ny cellule stem. Ity dingana ity dia niandoha tao amin'ny Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, manokatra ny varavarana amin'ny famokarana taova ho an'ny famindrana.
El Tonga tamin'ny 3 ny voa vita pirinty 2002D. Izy io dia maodely miasa tanteraka miaraka amin'ny fahafahana manivana ra sy mamokatra urine amin'ny biby. Io fampandrosoana io ihany koa dia noforonina tao amin'io andrim-panjakana io.
Adrian Bowyer dia nahita RepRap ao amin'ny Oniversiten'i Bath tamin'ny taona 2005. Izy io dia hetsika misokatra amin'ny fananganana mpanonta printy 3D mora vidy izay mamerina ny tenany, izany hoe afaka manonta ny kojakojany manokana izy ireo ary mampiasa fitaovana ampiasaina toy ny 3D filaments.
Herintaona taty aoriana, in 2006, tonga ny teknolojia SLS ary ny mety hisian'ny famokarana faobe noho ny tamin'ny laser. Miaraka amin'izany dia misokatra ny varavaran'ny fampiasana indostrialy.
2008 no ho taonan'ny mpanonta voalohany fahaizana mamerina tena. Darwin an'ny RepRap io. Tamin'ity taona ity ihany, nanomboka ihany koa ny serivisy famoronana fiaraha-mientana, tranonkala ahafahan'ny vondrom-piarahamonina mizara ny endrika 3D-ny mba ahafahan'ny hafa manonta izany amin'ny mpanonta 3D azy manokana.
Fandrosoana lehibe koa no hita teo amin’ny 3D prosthetics fahazoan-dàlana. Ny taona 2008 no ho taona ahafahan'ny olona mandeha voalohany noho ny tongotra prosthetika vita pirinty.
2009 no taonan'ny Makerbot sy kits ny mpanonta printy 3D, mba hahafahan'ny mpampiasa maro mividy azy ireo mora sy manamboatra ny mpanonta azy manokana. Izany hoe, miompana amin'ny mpanamboatra sy DIY. Tamin'io taona io ihany, Dr. Gabor Forgacs dia nanao dingana lehibe iray hafa amin'ny bioprinting, afaka mamorona lalan-dra.
El fiaramanidina vita pirinty voalohany amin'ny 3D dia ho tonga amin'ny 2011, noforonin'ny injeniera avy amin'ny Oniversiten'i Southampton. Izy io dia endrika tsy misy olona, ​​saingy azo amboarina ao anatin'ny 7 andro monja ary misy teti-bola 7000 12.000 €. Izany dia nanokatra ny fandrarana ny famokarana vokatra maro hafa. Raha ny marina, tamin'ity taona ity ihany no tonga ny prototype fiara vita pirinty voalohany, ny Urbee avy amin'i Kor Ecologic, miaraka amin'ny vidiny eo anelanelan'ny €60.000 sy €XNUMX.
Tamin'izany fotoana izany, ny fanontam-pirinty dia nanomboka nampiasa fitaovana mendri-kaja toy ny volafotsy sterling sy volamena 14kt, ka manokatra tsena vaovao ho an'ny jewelers, afaka mamorona sombintsombiny mora kokoa amin'ny fampiasana ny fitaovana marina.
Amin'ny 2012 dia ho tonga izy io ny voalohany prosthetic valanorano implant 3D natao pirinty noho ny vondrona mpikaroka Belzika sy Holandey.
Ary amin'izao fotoana izao dia tsy mitsahatra mitady ny tsena fampiharana vaovao, manatsara ny fahombiazany, ary hanohy ny fanitarana amin'ny orinasa sy trano.
Amin'izao fotoana izao, raha manontany tena ianao Ohatrinona ny vidin'ny mpanonta 3d, dia afaka manomboka amin'ny €100 na 200 € eo ho eo amin'ny vidiny mora indrindra sy kely indrindra, ka hatramin'ny €1000 na mihoatra amin'ny toe-javatra mandroso sy lehibe indrindra, ary na dia ny sasany aza mitentina an'arivony euros ho an'ny sehatra indostrialy.
Inona no atao hoe famokarana additive na AM
Ny fanontana 3D dia tsy inona fa famokarana additive, izany hoe, dingana famokarana izay, mba hamoronana modely 3D, mifanindry sosona fitaovana. Mifanohitra tanteraka amin'ny famokarana subtractive, izay mifototra amin'ny bloc voalohany (tabilao, ingot, bloc, bar, ...) izay esorina tsikelikely ny fitaovana mandra-pahatongan'ny vokatra farany. Ohatra, amin'ny famokarana subtractive ianao dia manana tapa-kazo voasokitra amin'ny lathe, izay manomboka amin'ny bozaka hazo.
Misaotra an'ity fomba revolisionera Afaka mahazo famokarana zavatra mora ao an-trano ianao, modely ho an'ny injeniera sy architects, mahazo prototype ho an'ny fitsapana, sns. Ankoatr'izay, ity famokarana additive ity dia nahafahana namorona ampahany izay tsy vita tamin'ny fomba hafa toy ny lasitra, extrusion, sns.
Inona no atao hoe bioprinting
Ny bioprinting dia karazana fanamboarana additive manokana, noforonina miaraka amin'ny mpanonta printy 3D ihany koa, saingy tsy mitovy amin'ny fitaovana inert ny vokatra. MEY manao sela sy taova velona, manomboka amin’ny hoditry ny olombelona ka hatramin’ny taova tena ilaina. Afaka manamboatra fitaovana biocompatible koa izy ireo, toy ny prostheses na implants.
Izany dia azo tratrarina avy amin'ny fomba roa:
Ny rafitra, karazana fanohanana na scaffold dia aorina amin'ny composites polymers biocompatible fa tsy lavin'ny vatana, ary ny sela no hanaiky azy. Ireo rafitra ireo dia ampidirina ao anaty bioréactor mba hahafahan'ny cellules honenan'izy ireo ary rehefa ampidirina ao amin'ny vatana, dia hanao lalana tsikelikely ho an'ny selan'ny zavamananaina.
Fihetseham-pon'ny taova na tavy isan-karazany izy io, fa tsy mampiasa fitaovana toy ny plastika, na hafa, kolontsaina sela velona ary fomba fametahana antsoina hoe biopaper (fitaovana biodegradable) mba hamolavola.
Ahoana ny fiasan'ny mpanonta 3D
El ny fomba fiasan'ny mpanonta 3d Tsotra kokoa noho izay mety ho hita izany:
Afaka manomboka manomboka amin'ny rindrankajy ka hatramin'ny Modely 3d na famolavolana CAD mba hamoronana ny modely tianao, na misintona rakitra efa noforonina, ary mampiasa scanner 3D mihitsy aza mba hahazoana ny modely 3D amin'ny zavatra tena izy.
Manana ny Modely 3D voatahiry ao anaty rakitra nomerika, izany hoe avy amin'ny fampahalalana nomerika misy ny refy sy ny bikan'ilay zavatra.
Ity manaraka ity dia fitetika, dingana iray izay "manapaka" ny maodely 3D ho sosona na silaka an-jatony na an'arivony. Izany hoe, ny fomba hitetika ny modely amin'ny rindrambaiko.
Rehefa manindry ny bokotra fanontana ny mpampiasa, ny mpanonta 3D mifandray amin'ny PC amin'ny alalan'ny tariby USB, na tambajotra, na ny rakitra alefa amin'ny karatra SD na pen drive, dia ho adika amin'ny processeur mpanonta printy.
Avy eo dia handeha ny mpanonta mifehy ny motera hamindra ny loha ary dia miteraka sosona mandra-pahatratra ny modely farany. Mitovitovy amin'ny mpanonta mahazatra, fa hitombo sosona ny volume.
Ny fomba namoronana ireo sosona ireo mety miovaova arakaraka ny teknolojia izay manana mpanonta 3D. Ohatra, azo atao amin'ny alalan'ny extrusion na resin.
Famolavolana 3D sy fanontana 3D
Rehefa fantatrao ny atao hoe mpanonta 3D sy ny fomba fiasany dia ny manaraka mahafantatra ny logiciel na fitaovana ilaina ho an'ny fanontana. Zavatra tena ilaina raha te hiala amin'ny sketch na hevitra mankany amin'ny zavatra tena 3D ianao.
Tokony ho fantatrao fa misy karazana rindrambaiko fototra maromaro ho an'ny mpanonta 3D:
Amin'ny lafiny iray dia misy ny fandaharan'asan'ny Modely 3D na famolavolana CAD 3D izay ahafahan'ny mpampiasa mamorona ny endrika hatramin'ny voalohany, na manova azy ireo.
Etsy andaniny dia misy ilay antsoina hoe software slicer, izay mamadika ny maodely 3D ho toromarika manokana hatonta amin'ny mpanonta 3D.
Eo koa ny rindrambaiko fanovana mesh. Ireo programa ireo, toy ny MeshLab, dia ampiasaina hanovana ny harato amin'ny maodely 3D rehefa miteraka olana amin'ny fanontana azy ireo, satria mety tsy hihevitra ny fomba fiasan'ny mpanonta 3D ny programa hafa.
Lozisialy mpanonta printy 3D
Ireto ny sasany amin'ireo rindrambaiko fanontana 3d tsara indrindra, sady voaloa no maimaim-poana, ho an'ny Modely 3d y Volavola CAD, ary koa rindrambaiko maimaim-poana na open source:
Google sy Last Software noforonina SketchUp, na dia lasa teo am-pelatanan'ny orinasa Trimble aza izany. Izy io dia rindrambaiko manokana sy maimaim-poana (miaraka amin'ny drafitry ny fandoavam-bola isan-karazany) ary miaraka amin'ny fahafahana misafidy eo amin'ny fampiasana azy eo amin'ny biraon'ny Windows na amin'ny Internet (izay rafitra miasa misy navigateur web mifanentana).
Ity programa an'ny famolavolana sary sy modely 3D dia iray amin'ireo tsara indrindra. Miaraka amin'izany ianao dia afaka mamorona karazana rafitra rehetra, na dia natao manokana ho an'ny famolavolana maritrano, famolavolana indostrialy, sns.
Namorona ny Ultimaker Cura, fampiharana natao manokana ho an'ny mpanonta 3D izay azo ovaina sy ovaina ho kaody G ny mari-pamantarana fanontana printy. Noforonin'i David Raan fony izy niasa tao amin'ity orinasa ity, na dia ho mora kokoa aza ny fikojakojana azy dia hanokatra ny kaody eo ambanin'ny fahazoan-dàlana LGPLv3 izy. Izy io dia loharano misokatra ankehitriny, manome fahafahana bebe kokoa mifanaraka amin'ny rindrambaiko CAD antoko fahatelo.
Amin'izao fotoana izao dia malaza be izy io ka a amin'ny be mpampiasa indrindra eran-tany, miaraka amin'ireo mpampiasa maherin'ny 1 tapitrisa avy amin'ny sehatra samihafa.
Ny orinasa Prusa dia naniry ny hamorona rindrambaiko manokana ihany koa. Izy io no fitaovana open source antsoina hoe PrusaSlicer. Ity fampiharana ity dia tena manankarena amin'ny lafiny fiasa sy endri-javatra, ary manana fivoarana mavitrika.
Miaraka amin'ity programa ity ianao dia afaka manondrana modely 3D amin'ny rakitra teratany izay azo ampifanarahana ireo mpanonta printy Prusa tany am-boalohany.
Ity programa hafa ity dia maimaim-poana, ary azo apetraka amin'ny roa Microsoft Windows, macOS, ary amin'ny GNU/Linux. Ideamaker dia natao manokana ho an'ny vokatra Raise3D, ary izy io dia mpitsikilo hafa ahafahanao mitantana ny prototypes anao amin'ny fanontana amin'ny fomba haingana.
Mila fampidirana vitsivitsy ny FreeCAD, tetikasa open source izy io ary maimaim-poana tanteraka amin'ny famolavolana 3D CAD. Miaraka amin'izany dia afaka mamorona modely rehetra ianao, toy ny ataonao ao amin'ny Autodesk AutoCAD, ny dikan-karama sy ny code proprietary.
Tsotra ny fampiasana azy, ary miaraka amin'ny interface intuitive ary manankarena amin'ny fitaovana ampiasaina. Izany no antony iray amin'ireo be mpampiasa indrindra. Izy io dia miorina amin'ny OpenCASCADE ary voasoratra amin'ny C++ sy Python, eo ambanin'ny lisansa GNU GPL.
Fahalalana lehibe iray hafa eo amin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaim-poana. Ity rindrambaiko lehibe ity dia ampiasain'ny matihanina maro, nomena ny hery sy vokatra manolotra izany. Misy amin'ny sehatra maro, toy ny Windows sy Linux, ary eo ambanin'ny fahazoan-dàlana GPL.
Fa ny zava-dehibe indrindra amin'ity rindrambaiko ity dia tsy vitan'ny hoe manompo jiro, rendering, animation ary famoronana sary telo dimensions ho an'ny horonan-tsarimihetsika, lalao video, sary hosodoko, sns., fa azonao ampiasaina amin'ny famolavolana 3D ihany koa izany ary mamorona izay ilainao hanonta.
Izy io dia sehatra mitovy amin'ny FreeCAD, saingy rindrambaiko manokana sy karama. Ny fahazoan-dàlanao dia manana a vidiny avo, fa iray amin'ireo fandaharana be mpampiasa indrindra amin'ny sehatra matihanina. Miaraka amin'ity rindrambaiko ity dia afaka mamorona endrika CAD 2D sy 3D ianao, manampy ny fivezivezena, textures maro amin'ny fitaovana, sns.
Azo alaina ho an'ny Microsoft Windows izy io, ary iray amin'ireo tombony azony ny mifanaraka amin'ny DWF rakitra, izay iray amin'ireo miely indrindra sy novolavolain'ny orinasa Autodesk mihitsy.
Autodesk Fusion 360 Manana fitoviana maro amin'ny AutoCAD izy io, saingy mifototra amin'ny sehatra rahona, mba hahafahanao miasa amin'ny toerana rehetra tianao ary manana ny dikan-teny mandroso indrindra amin'ity rindrambaiko ity. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy mandoa famandrihana ihany koa ianao, izay tsy dia mora loatra.
TinkerCAD dia programa modely 3D hafa izay azo ampiasaina amin'ny aterineto, avy amin'ny navigateur web, izay manokatra be ny fahafahana mampiasa azy na aiza na aiza ilainao. Nanomboka tamin'ny 2011 dia nahazo mpampiasa, ary lasa sehatra malaza indrindra eo amin'ny mpampiasa ny 3D mpanonta printy, ary na dia any amin'ny foibe fanabeazana, satria ny fianarana curve dia mora kokoa noho ny Autodesk.
Azo alaina ho an'ny Linux, Windows, ary macOS izy io, ary maimaim-poana tanteraka ary loharano misokatra. MeshLab dia rafitra rindrambaiko fanodinana harato 3D. Ny tanjon'ity lozisialy ity dia ny hitantana ireo rafitra ireo ho an'ny fanitsiana, fanamboarana, fisafoana, famandrihana, sns.
Ny orinasa Eoropeana Dassault Systèmes, avy amin'ny orinasa SolidWorks Corp., dia namolavola iray amin'ireo rindrambaiko CAD tsara indrindra sy matihanina indrindra ho an'ny modely 2D sy 3D. SolidWorks dia mety ho solon'ny Autodesk AutoCAD, saingy izany no izy natao manokana ho modely rafitra mekanika. Tsy maimaim-poana izy io, ary tsy loharano misokatra, ary azo alaina ho an'ny Windows.
Farany, Creo dia iray amin'ireo rindrambaiko CAD/CAM/CAE tsara indrindra ho an'ny mpanonta 3D azonao jerena. Izy io dia rindrambaiko noforonin'ny PTC ary mamela anao hamolavola vokatra avo lenta marobe, haingana ary amin'ny asa kely. Izany rehetra izany dia noho ny interface intuitive natao hanatsarana ny fampiasana sy ny vokatra. Azonao atao ny manamboatra ampahany ho an'ny famokarana additive sy subtractive, ary koa ho an'ny simulation, famolavolana generative, sns. Voaloa izy io, loharano mihidy ary ho an'ny Windows ihany.
Ny dingana manaraka amin'ny famolavolana amin'ny fampiasana ny rindrambaiko etsy ambony dia ny fanontana tena izy. Izany hoe, rehefa avy io rakitra miaraka amin'ny modely ny mpanonta 3D dia manomboka mamorona ny sosona mandra-pahavitana ny modely sy ny fahazoana ny tena famolavolana.
Este mety haharitra mihoatra na latsaka ny dingana, miankina amin'ny hafainganan'ny fanontana, ny fahasarotan'ny sombin-javatra ary ny habeny. Saingy mety haharitra minitra vitsivitsy ka hatramin'ny ora. Mandritra io dingana io, ny mpanonta dia azo avela tsy voakarakara, na dia tsara foana aza ny manara-maso ny asa tsindraindray mba hisorohana ny olana tsy hiafara amin'ny vokatra farany.
Mazava ho azy, rehefa vita ny fanontana ny ampahany amin'ny mpanonta 3D, dia tsy mifarana eo ny asa amin'ny ankamaroan'ny tranga. Avy eo matetika ny hafa no tonga dingana fanampiny antsoina hoe post-processing toy ny:
Esory ny ampahany sasany mila amboarina ary tsy anisan'ny modely farany, toy ny fototra na fanohanana ilaina mba hijoroan'ilay ampahany.
Fasika na poloney ny tany mba hahazoana vokatra farany tsara kokoa.
Ny fitsaboana amin'ny tarehy amin'ny zavatra, toy ny varnishing, hosodoko, fandroana, sns.
Ny ampahany sasany, toy ny metaly, dia mety mila dingana hafa toy ny fanaovana mofo.
Raha toa ka voatery nozaraina ho ampahany ny ampahany iray satria tsy azo natao ny nanorenana manontolo noho ny habeny, dia mety ilaina ny manambatra ny ampahany (assembly, glue, welding...).
Farany, ny fizarana amin'ny FAQ na fanontaniana sy valiny apetraka matetika izay matetika mipoitra rehefa mampiasa mpanonta 3D. Ny tena karohina matetika dia:
Ahoana ny fomba hanokafana STL
Ny iray amin'ireo fanontaniana matetika dia ahoana no ahafahanao manokatra na mijery rakitra .stl. Ity fanitarana ity dia manondro fisie stereolithography ary azo sokafana ary ovain'ny rindrambaiko Dassault Systèmes CATIA amin'ireo programa CAD hafa toa ny AutoCAD sns.
Ankoatra ny STL dia misy ihany koa rakitra hafa toy ny .obj, .dwg, .dxf, sns. Ireo rehetra ireo dia malaza be ary azo sokafana amin'ny programa maro samihafa ary na dia manova endrika aza.
Tokony ho fantatrao fa tsy voatery hamorona sary 3D foana ianao, afaka mahazo modely efa vonona amin'ny karazan-javatra rehetra, manomboka amin'ny tarehimarika amin'ny lalao video na sarimihetsika, hatramin'ny kojakoja ilaina ao an-tokantrano, kilalao, prosthetika, saron-tava, telefaona. tranga, sns. Raspberry Pi, sy ny maro hafa. Mihamaro hatrany ny tranokala misy tranomboky amin'ireo môdely efa vonona hisintona sy hanonta amin'ny mpanonta 3D anao. Ny tranonkala sasany atolotra dia:
Avy amin'ny tena modely (3D scanning)
Fomba iray hafa, raha ny tianao dia ny mamorona klone tonga lafatra na dika mitovy amin'ny zavatra 3D hafa, dia ny fampiasana a Scanner 3d. Izy ireo dia fitaovana ahafahanao manara-maso ny endriky ny zavatra iray, mamindra ny modely amin'ny rakitra nomerika ary mamela ny fanontana.
Fampiharana sy fampiasana ny mpanonta 3D
Farany, ny mpanonta 3D dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana maro. Ny fampiasana malaza indrindra azo omena dia:
Iray amin'ireo fampiasa malaza indrindra amin'ny mpanonta 3D eo amin'ny sehatry ny matihanina ny fanaovana prototyping haingana, izany hoe, prototyping haingana. Na hahazoana kojakoja ho an'ny fiara hazakazaka, toy ny Formula 1, na hamorona prototypes amin'ny maotera na mekanika sarotra.
Amin'izany fomba izany, ny injeniera dia avela hahazo ampahany haingana kokoa noho ny hoe tsy maintsy alefa any amin'ny orinasa iray hanaovana famokarana, ary koa ny fahazoana azy. andrana prototypes hijerena raha toa ka mandeha araka ny nantenaina ny modely farany.
maritrano sy fanorenana
sary: ​​© www.StefanoBorghi.com
Mazava ho azy, ary mifandray akaiky amin'ireo voalaza etsy ambony ireo, dia azo ampiasaina koa izy ireo manangana rafitra ary manao fitsapana mekanika ho an'ny mpanao mari-trano, na manorina ampahany sasany tsy azo amboarina miaraka amin'ny fomba fiasa hafa, mamorona prototypes amin'ny tranobe na zavatra hafa ho santionany na modely, sns.
Ankoatra izany, ny firongatry ny mpanonta simenitra sy ny fitaovana hafa, dia nanokatra ny varavarana ho amin'ny fahafahana manonta trano haingana sy mahomby kokoa sy amim-panajana amin'ny tontolo iainana. Efa naroso mihitsy aza ny hitondrana ity karazana mpanonta printy ity any amin'ny planeta hafa ho an'ny zanatany ho avy.
Famolavolana sy fanamboarana firavaka sy kojakoja hafa
Ny iray amin'ireo zavatra miely patrana indrindra dia firavaka vita pirinty. Fomba hahazoana ampahany miavaka sy haingana kokoa, miaraka amin'ny toetra manokana. Ny mpanonta printy 3D sasany dia afaka manonta ody sy kojakoja sasany amin'ny fitaovana toy ny nylon na plastika amin'ny loko samihafa, fa misy ihany koa ny sasany ampiasaina amin'ny sehatry ny firavaka matihanina izay afaka mampiasa metaly mendri-kaja toy ny volamena na volafotsy.
Eto ianao dia afaka mampiditra vokatra sasany izay atao pirinty koa tato ho ato, toy ny akanjo, kiraro, kojakoja lamaody, Etc.
Fialam-boly: zavatra vita amin'ny mpanonta 3D
Aza adino FIALAM-BOLY, izay no ampiasain'ny mpanonta 3D an-trano maro. Ireo fampiasana ireo dia mety miovaova be, manomboka amin'ny famoronana fanohanana manokana, mankany amin'ny famolavolana haingon-trano na kojakoja, amin'ny fandokoana ny sarin'ireo olona noforonina tianao indrindra, tranga ho an'ny tetikasa DIY, mugs manokana, sns. Izany hoe, ho an'ny fampiasana tsy mahasoa.
maro indostrian'ny famokarana Efa mampiasa mpanonta 3D izy ireo hamokarana ny vokatra. Tsy noho ny tombony amin'ity karazana fanamboarana additive ity ihany, fa koa satria indraindray, raha jerena ny fahasarotan'ny endrika iray, dia tsy azo atao ny mamorona azy amin'ny fomba mahazatra toy ny extrusion, ny fampiasana lasitra, sns. Fanampin'izany, nivoatra ireo mpanonta printy ireo, afaka mampiasa fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny fanontam-pirinty metaly.
Matetika koa ny manao ampahany ho an'ny fiara, ary na dia ho an'ny fiaramanidina aza, satria mamela ny ampahany sasany azo alaina izay tena maivana sy mahomby kokoa. Ny lehibe toy ny AirBus, Boeing, Ferrari, McLaren, Mercedes, sns, dia efa manana azy ireo.
Mpanonta printy 3D amin'ny fitsaboana: dentistry, prosthetics, bioprinting
Ny iray amin'ireo sehatra lehibe hampiasana mpanonta 3D dia ny sehatry ny fahasalamana. Azo ampiasaina amin'ny tanjona maro izy ireo:
Manamboatra prostheses amin'ny nify kokoa, ary koa ny brackets, sns.
Fanontam-bio amin'ny tavy toy ny hoditra na taova ho an'ny famindrana ho avy.
Karazana prostheses hafa ho an'ny olana amin'ny taolana, motera na hozatra.
Sakafo / sakafo vita pirinty
Ny mpanonta printy 3D dia azo ampiasaina hanamboarana haingon-trano amin'ny takelaka, na hanonta zava-mamy toy ny sôkôla amin'ny endriny iray, ary na dia amin'ny sakafo maro hafa aza. Noho izany, ny indostrian'ny sakafo mitady hampiasa ny tombony amin'ireo milina ireo ihany koa izy.
Ankoatra izany, fomba iray manatsara ny sakafo ara-tsakafo, toy ny fanontana fillet hena vita amin'ny proteinina recycled na nesorina ny vokatra manimba sasany mety ho ao anaty hena voajanahary. Misy ihany koa ny tetikasa hamoronana vokatra ho an'ny vegans na vegans izay maka tahaka ny tena vokatra hena, saingy noforonina avy amin'ny proteinina anana.
Ary, mazava ho azy, ny mpanonta printy 3D dia fitaovana iray handrahona ny foibem-pampianarana, satria izy ireo namana mahafinaritra ho an'ny kilasy. Miaraka amin'izy ireo, ny mpampianatra dia afaka mamorona modely mba hianaran'ny mpianatra amin'ny fomba azo ampiharina sy intuitive, na ny mpianatra mihitsy no afaka mampitombo ny fahaiza-manaony amin'ny faharanitan-tsaina sy mamorona karazana zavatra rehetra.
Mpanonta printy 3D indostrialy tsara indrindra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fanontana 3D » Torolàlana farany ho an'ny mpanonta 3D
Schottky diode: inona izany ary inona no mampiavaka azy